हात्तीको आक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु
जंगलमा घाँस काट्न गएकाले बेला जंगली हात्तीको आक्रमणबाट बुधवार कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका दुईजना महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–२ का ३८ वर्षीया वसन्ती भट्ट र ५० वर्षीया भुरी बोहरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताए ।
प्रहरीले स्थानीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा बोहराको मृत्यु भएको जनाएको छ । 'बिहानै गाउँका महिला समूहमा जंगल गएर घाँस काटिरहेका बेला एक्कासी हात्तीहरूको बथानले आक्रमण गर्दा दुई महिलाको मृत्यु हुन पुग्यो,' उनले भने, 'आक्रमणबाट स्थानीय चारजना महिला घाइते भएका छन् ।'
घाइते हुनेमा महाकाली नगरपालिका–२ कै ललिता बोहरा, सुनिता विष्ट, उमा साउँद र सुशिला बम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेमध्ये दुईको भारतको खटीमा र दुई जनाको भीमदत्तनगरस्थित महाकाली अस्पतालमा उपचार हुँदैछ । '२०÷२५ जना महिलाको समूह घाँस काट्न जंगल पसेका थियौं,' स्थानीय शान्ति ओझाले भनिन्, 'एकछिन त जंगलमा सन्नाटा नै मच्चियो ।'
भागेर ज्यान जोगाएकी ओझाले जंगलबाट निस्केलगत्तै प्रहरीमा खबर गरेको बताए ।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाः बोलपत्र ...
दैनिक कागती पानी पिउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस्
नङ टोक्नु गम्भीर बिरामीको संकेत ?
कम निन्द्राका कारण समस्यामा मानिस
चाणक्यका यी ६ नीति : यी हुन् सफलताका सुत्र
कहिले र कसरी पिउने पानी ?
लोकप्रिय खाजा मम, तर धेरै खाँदा बढ्छ रक्तचाप